गाउँपालिकालाई नेपालकै नमुना बनाउँछु : सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप जैसवाल - Birgunj City
बिरगंज सिटी १८ माघ २०७६, शनिबार १६:३९मा प्रकाशित (७ महिना अघि) २४०६७ पाठक संख्या
माघ १८ वीरगंज/ पर्साबासीको लागी प्रदिप जैसवालको नाम नयाँ भने पक्कै पनि होईन । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं. ५ महुवन घरभएका जैसवाल अहिले सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख हुन । बिधार्थीकालदेखी नै समाजसेवा गर्ने चाहना बमोजिम उनी गरिब, बिपन्न परिवारको सुख, दुःखमा स्थानीयसंग सधै अगाडी रहेकै कारण स्थानीय चुनावमा आफू निर्वाचित भएको अध्यक्ष जैसवालले बताए । समाजमा आफूले गरेको योग्दान र समाजिक कार्यको मुल्याङकन गरेर नै जनताले मलाई राजनीतीमा आउन प्रेरित गरेकोले जनताको सेवा र विकासशिल समाजको निर्माण गर्न आफू गाउँपालिकामा कार्य गरिरहेको दाबी गर्छन । स्थानीय निर्वाचन भएको झण्डै ढाई वर्ष बित्न लाग्दा गाउँपालिकामा के के विकासका कामहरु भएको छ भन्ने विषयमा उनै गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप जैसवालसंग बीरगंज सिटीका लागी गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
१) सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो २ सालको कार्यकालदेखी हालसम्म सबै क्षेत्रमा राम्रै विकास भएको छ । गाउँपालिका ग्रामिण क्षेत्रमा पर्ने भएकोले त्यहाँ बाटोघाटोको अवस्था एकदमै दैनिय थियो तर आफू जनप्रतिनीधि भएर आएपछि प्रायः सबै ठाउँको मुख्य सडक बनी सकेको छ र बन्ने क्रम पनि जारी छ ।
मुख्यतः साँघुरो सडक फराकिलो गर्दै सडक र नालाको काम तिब्र गतिमा भईरहेको छ । मुख्यमन्त्री अन्तर्गतको बेटी बढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत एसईई उतिर्ण गरेका छात्राहरुलाई २ सालदेखि साईकल वितरण गरी शिक्षाको पहुँचमा छोरीहरुलाई पनि जोडिरहेका छौ । त्यस्तै गर्भवती महिलालाई झुल वितरण गर्नुको साथै गर्भवती र बच्चाको स्वास्थको लागी आयोनुन, होरलिक्स, तेलको साथसाथै ५/५ केजी दाल पनि दिने गरेको छौ ।
कृषिमा सिजन अनुसारको सबसिडीमा उन्नत जातको बिउबिजन, खाद्यमल्ल पनि वितरण गरिरहेका छौ । यहाँका जनताले स्वस्चछ र जाता तरकारी सेवन गर्न सक्ुन भने उदेश्यले प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण तथा किसानलाई सिपमुल तालिम सहित बिउबिजन उपलब्ध गराई रहेका छौ । उपभोक्ताले स्वस्च र सफा मासु खाने गरी गाउँपालिकामा भएको बजारमा मासु बेच्ने व्यापारीको लागी डी फ्रिजको पनि व्यवस्था मिलाएको छौ । मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थयमा देखिएएको बेतिथिलाई सुधार गरी शिक्षा र स्वास्थयको पहँुचमा जनतालाई सजिलो हुने वातावरण सृजना गरेका छौ ।
समाजमा रहेका विकृति जस्तै, बालबिबाह, दाईजो प्रथा जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागी जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुको साथै ‘‘बेटी बढाउ बेटी बचाउ’’ अभियानलाई पनि तिब्रता दिएका छौ ।
२) चुनवाको बेला जनतासंग यहाँले गरेको प्रतिबद्धताहरु कतिको पुरा गर्नु भएको छ ? के–के गर्न बाँकी छ ?
जनतासंग गरेका प्रतिबद्धताको सबै क्षेत्रमा काम भएको पनि छ र भईरहेको पनि छ । वाँचा अन्तर्गत नै पिच ढलानसहित सडक फराकिलो र प्रत्येक वडामा नमुना बालबिकास बनाउने जस्ता विकास निर्माणको कार्य भईरहेको छ । तसर्थः गाउँपालिकाको समस्या र जनताको गुनासो तथा चाहनालाई समेटेर नै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थय, सडक, नाला, सिचाई लगायतको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी गरिरहेको छु ।
जनतासंग वाँचा गरेका धेरै काम पुरा भईसकेको छ, जुन गाउँपालिकाका जनताहरुले देखिरहेकै छन् । अहिले पनि धेरै काम गर्न बाँकी नै छ, अबको बाकी कार्यकालसम्म त्यो पनि पुरा गरेर पर्साको मात्रै नभई नेपालकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरेर देखाउँछु ।
३) अहिलेको आधुनिकतासंगै कृषकले कम लागनी मै बढि उत्पादन गर्न सक्ने जस्ता योजना ल्याउनु भएको छ कि छैन ?
किसानको उत्पादन बढाउनको लागी राष्ट्रिय बिउबिजन संघसंग सहकार्य गरेर उन्नत जातका बिउबिजन दिएका छौ । कृषि पेशामा सहुलियत हुने गरी सिचाईको लागी नदी, नहरको बाँध र पईनीलाई व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले हामी पनि नयाँ तरिकाले कार्य गरिरहेको हुनाले अहिलेको आधुनिकतासंगै चाहिएजतिको विकास गर्न सकेका छैनौ । तैपनि किसानको जिवनस्तर उकास्नको लागी शिप मुलक तालिम सहित किसानलाई विभिन्न स्रोधसाधन उपलब्ध गराई कृषि उब्जनी बढाउन कार्य गरिरहेका छौ । जसबाट धेरै किसान लाभांबित पनि छन् । आगामी वर्षमा यसलाई राम्रो गर्न अझै प्रभावकारी ढङ्गले योजना बनाउने छलफल पनि गरेका छौ ।
४) बेला–बेलामा तपाई र उपाअध्यक्ष बिच के का लागी बिबाद भएको देखिन्छ ?
यो बिबाद सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा मात्रै होईन धेरै ठाउँमा भएको देखिन्छ । अब उपाध्यक्षमा र वडा अ्रध्यक्षमा जितेका व्यक्तिले गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा बढि अधिकारको चाहना राख्ने हुँदा पनि अलि मनमोटाव जस्तो देखिएको छ । मुख्यतः शिक्षाको कमी र एकअर्काबिच सम्झदारी नहुनुको कारण कहिलेकाही बिबाद देखिएको छ । तर हाम्रो गाउँपालिकामा खासै बिबाद छैन् ।
५) कमीश्न खाने र आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने जस्ता कामलाई मात्रै तपाईले बढावा दिएको आरोप छ नी ?
त्यस्तो केही पनि छैन् । गाउँपालिका भित्र ३४ जनाको टिम मिलेर बजेट खर्च गर्ने किताब बनाएका छौ । त्यसमा सानोतिनो कामलाई कोटेशनको मार्फत दिने र ठुलो काममा सबै राजनीतिक दललाई भेला गराई कम पैसामा ठेक्का स्वीकार्य गर्ने ठेकेदारलाई दिने गरेका छौ । त्यस्तै केही सानो कामलाई उपभोक्ता समिति बनाएर पनि दिने गरेका छौ ।
कमीशन र पार्टीको कार्यकर्तालाई नै प्राथमिकता दिई कुनै पनि काम भएको छैन । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताको बिचमा सबै काम भईरहेको छ ।
६) यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष भएर आईसकेपछि शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ?
गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप र खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरायौं । त्यस्तै प्रत्येक माबि, निमा बिद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था मिलाई गाउँपालिकालाई कुपोषणा मुक्त घोषणा गराउन प्रत्येक वडाको स्वास्थ क्षेत्रमा काम गर्ने टिम परिचालन गरेका छा,ै जुन एकदमै क्रियशिल भएर काम गरिरहेका छन् । शैक्षिक स्तर उकास्नको लागी बिद्यालयमा विभिन्न किसिसमको प्रतियोगीतामार्फत बिधार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराई बिजेतालाई पुरस्कारसहित सम्मान दिने गरेका छौ ।
अहिले स्क्ुलको लागी ४० सिटवाला बस पनि खरिद गर्न लागेका छौ । ताकी पालिका भित्र रहेका विभिन्न स्कुलका विधार्थीहरुलाई एक ठाउँमा बोलाई बिज्ञ व्यक्तिहरुको माझमा प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षामा देखिएको कमजोरी किन र के कारण ? बच्चा किन राम्रो गर्न सकेनन् ? भने बारे जानकारी लिई शिक्षक र विधार्थीहरुमा देखिएको कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै शिक्षकले पनि विधार्थीहरुलाई पढाउनेतर्फ ध्यान जाने गरि कडा नितीनियम बनाउँछौ । जस्ले शिक्षक पनि विधार्थीहरुलाई राम्रोसंग पढाउनेतर्फ ध्यान दिनुहुन्छ ।
प्रत्येक विद्यालयमा प्रोजेक्टरको व्यस्था सहित कम्पयुटरको छुट्टै छुट्टै कक्षा पनि संचालन गराउने कार्य हुँदैछ । धेरै ठाउँमा खोनपानी, बस्ने बेन्च जस्ता अनेकौ भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियोृ । ती सबै समस्यालाई हल गर्दै मावि बिद्यालयदेखी नै कम्पयुर र प्रोजेक्टरको व्यवस्था मिलाई निमावि र तल्लो कक्षासम्म पनि लागु गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने सोच छ ।
त्यस्तै निजी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुने र समुदायी विद्यालयमा खासै राम्रो नहुने जुन मानसिकता छ, त्यो बिस्तारै बिस्तरै हटाउँदै गुणस्तरीय र मितिब्ययी वातारवणमा शिक्षाको विकास गर्ने योजनासहित अगाडी बढिरहेका छौ । तसर्थः आधुनिक शिक्षाको लागी प्रजेक्टर, कम्पयूटर र अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराई रहेका छौ ।
७) अन्य स्थानीय तहमा विधार्थीहरुलाई प्रोतोसाहन गर्ने गरी दिवा खाजाको साथ–साथै केही आर्थिक र्कम पनि दिई शिक्षामा सुधार ल्याउने कार्य गरेको देखिन्छ, यसतर्फ यहाँको पहल के छ ?
हामीले बिधार्थी भर्ना अभियान गर्ने बेलामा नै बच्चाहरुलाई बिद्यालयमा आउने यदि कुनै समस्या छ, भने सबै समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौं भने आम जनताको बिच प्रतिबद्धतासहित बिधार्थीहरुलाई बिद्यालय भर्ना गराएका छौ । प्रत्येक गाउँ र टोलटोलमा कुनै पनि बच्चा कुनै किसिमको समस्याबाट शिक्षा लिन बञ्चित नहोस भने सूचना पनि जारी गरेका छौ ।
भोकै पेट, पोसाक नभएको, कलम, किताब जस्ता अनेकौ समस्या भएका विधार्थीहरुलाई पहिचान गरी गाउँपालिकालाई जानकारी दिन प्रत्येक स्कुलका प्रधानाध्यापकहरुलाई जानकारी गराईएको छ । प्रत्येक बिद्यालयमा बच्चाहरुको दिवा खाजाको लागी रकम पनि पठाउने गरेका छौ । बच्चालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु ठिन नभएकोले उनीहरुको घरपरिवारमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्दै बच्चहरुलाई शिक्षाको पहँुचसंग जोड्ने काम भईरहेको छ ।
८) तपाईको गाउँपालिकामा भएका बेरोजगार युवा तथा महिलाहरुलाई रोजगारी दिन के योजना ल्याउनु भएको छ ?
हामी कहाँ मात्रै होईन, नेपालमै बेरोजगारीको संख्या बढि छ । युवाहरुको माझमा बेमौसमी तरकारी खेती रोजगारतर्फ उन्मुख हुने आधारहरु हुन । सामुहिक खेती, पशुपालन जस्ता अन्य कृषि पेशा गर्ने युवाहरुलाई सहयोग गर्न गाउँपालिका पाईलामा पाईला मिलाएर हिँडन तयार छ । सामुहिक खेती गर्नमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च दिन हामी तयार छौ ।
कृषिसंगसंगै मोटसाईकल बनाउने, पोलम्बरको काम लगायत सिपमुलक तालिमको आयोजना गरी युवाहरुलाई रोजगार बनाउन कम भएको छ ।
त्यस्तै हाम्रो गाउँपालिकामा थारु समुदायहरुको पनि बसोबास धेरै छ र थारु समुदायका महिलाहरु ढकियाँ राम्रो बनाउनु हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरुलाई ढकिया बनाउनमा लाग्ने सम्पूर्ण स्रोत साधन र खर्च गाउँपालिकले नै उपलब्ध गराई त्यसको बिक्रि वितरणको जिम्मेवारी समेत हामीले लिएका छौं तर पनि यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।
खान, बस्नलाई पुगिरहेको छ, किन बेकारमा बढि मेहेन्त गर्ने जस्ता सोचले चाँही यहाँका महिला यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् । गाउँपालिकाले निःशुल्क केही दियो भने लिन तयार हुनुहुन्छ तर हामीसंग सहकार्य गरी अलि मेहेन्त नै गरी आय आर्जन गर्नेतर्फ ध्यान भने छैन । तर पनि हामीले सिलाई कटाई सम्बन्धी विभिन्न सिपमुलक तालिम दिएका छौ । जसमा धेरै महिलाहरु सिप सिके्र आय आर्जन पनि गरिरहेका छन् ।
वडा नं. १ का महिलाहरुले एउटा समुह बनाई गरिबी निवारण मार्फत ऋण लिई आफ्नै समूहमा लगानी गरी लगभग १ करोड जति रुपैया पु¥याउनु भएको छ । वहाँहरुले भैसी पाल्न गर्छु भन्दै दूध दिने यहाँ एउटा डेरी फारम खोल्न छलफल पनि गर्नुभयो । त्यसमा मैले पालिकाबाट बजेट छुट्याई दिन्छु भने तर बारम्बार भनिरहँदा पनि त्योबेलादेखि अहिलेसम्म एकचोटी पनि वहाँहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु भएको छैन् । पछिल्लो समय महिलाहरु व्यवसाय गर्न ईच्छुक देखिए पनि अहिले भने मौन छन् । अनि हामी के गर्न ?
९) सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा भएको स्थानीय स्रोत साधनलाई पहिचान गरी परिचालन गर्दा के कस्ता आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ ?
पालिकामा भएको जमुनीया खोलालाई गत वर्ष टेन्डर गरेर आय आर्जन गरेका थियौ । यो संगसंगै गाउँपालिकामा भएको २/३ वटा पोखरीबाट पनि केही रकम लिईरहेका छौ । त्यसतै घरबाहालबाट पनि केही आय आर्जन भईरहेको छ । त्यस्तै पारसनाथ मंदिरलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्रय भित्रयाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौ ।
१०) अबको आउँदो कार्यकालमा गाउँपालिकाले के के पाईसक्ने काम यहाँले गरिसक्नु हुन्छ ?
कुनै पनि काम पूर्ण रुपले पुरा हुने अवस्था छैन् । अरु गाउँपालिकाभन्दा हाम्रो गाउँपालिकाको क्षेत्रफल धेरै नै ठुलो भएकोले पालिकाको मुख्य सडक बाहेक गल्लीका धेरै सडकको काम भएपनि पूर्ण रुपमा हुने अलि असम्भव छ ।
३३ वटा टोल र ३७ हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिकमा हरेक टोलमा पिच र पक्की ढलान सडक बनाउन अलि नभयाईए जस्तो छ । तर पनि ७५ प्रतिशत जति काम हामी पुरा गर्छाै । तैपनि पालिकामा भएका बैद्धिक र शिक्षित वर्गसंग सहकार्य गरी विकास निर्माणको कार्य भईरहेको छ । यदि म मा केही कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई औल्याई सल्लाह सुझाव दिन जनतामा बिनम्र अनुरोध गर्दछु । पालिकामा भएका समस्यालाई एकअर्कासंगको परामर्श र सहकार्यको माध्यमबाट शुसासन सहितको समृद्ध गाउँपालिका बनाउँछु ।